SAWIRRO: Xisbiga Dadka Somaliyed Ayaa Ansixiyay Golaha Fulinta Xisbiga – Kismaayo24 News Agency
kulan ay muqdisho ku yeesheen madaxda ugu saraysa xisbiga dadka soomaaliyeed ayaa waxaa ay cod aqlabiyad leh ku ansixiyeen xubno ka mid noqonaya golaha fulinta xisbiga dadka soomaaliyeed.
xisbigaan ayaa waxaa ku midaysan aqoon yahano, dhalinyaro, haween iyo dad iskugu jira bulshada noocyadeeda kala duwan.
gudoomiyaha xisbiga dadka Prof: Saciid ciise maxamuud ayaana shir gudoominayay shirkaan waxaana ka soo qayb galay inta badan masuuliyiinta ugu saraysa xisbiga.
xoghayada guud ee xisbiga dadka soomaaliyeed ayaa waxaa uu cadeeyay in xubnaha ku soo biiray golaha fulinta xisbiga ay wax badan ka badali doonaan u adeegida shacabka soomaaliyeed waxaana uu intaasi ku daray in xubnahaani ay ku soo xusheen howl karnimo, Cadaalad, Hufnaan Si ay u dardar galiyaan howlaha muhiim ka ah ee horyaala xisbiga.
Qaar ka mid ah xunbaha xisbiga ugu saraysa ayaa sheegay in ay guul u tahay xisbiga dalka soomaaliyeed in ay ku soo biiraan xubno cusub oo matali doona bulshada qayba heeda kala duwan waxaana ay intaas ku dareen in ay ku faraxsan yihiin ansixintooda “waasida ay sheegtay gudoomiye ku xigeenka xisbiga”.
Gudoomiyaha Xisbiga dadka soomaaliyeed “Prof: Saciid Ciise Maxamuud Ayaa Waxaa uu sheegay in uu ku faraxsan yahay in ay soo dhamaato soo xulista golaha fulinta xisbiga dadka waxaana uu sheegay in ay muhiimada siinayaan sidii dadka loogu adeegi lahaa kulan kaani ayaana bishiiba mar dhaca waxaana ay u jeedadu tahay in golaha fulinta xisbiga ay jeex jeexaan siyaadada iyo nidaam ka hogaaminta ee xisbiga dadka soomaaliyeed”.
Dhinaca kale gudoomiyaha xisbiga ayaa eedeyn u jeediyay dowlada madaxweyne farmaajo waxaan uu yiri “Dowlada Farmaajo Waxay U Muuqataa Mid Ku Dhimatay Meeshii Ay Ku Dhalatay, Waxaana uu sheegay la soo hormariyo Doorashooyinka Guud Ee Dalka Ee Dhici Lahaa 2020 ka Si looga badbaado Mudo Korarsi Ku Yimaada Doorashada Dalka”
TOP NEWS: Dhageyso Madaxweynaha Koonfur Galbeed oo Saraakiisha Amisom ka Dalbaday Hal Arin oo Muhiim u ah deegaanada Koonfur Galbeed
Tifaftiraha K24 15th May 2016
Sawirro:- Madaxweynaha Soomaaliya oo baaq ka soosaaray Fatahaadaha Wabiyada.
admin 28th October 2019 28th October 2019
Mashaaric lagu hormarinayo Gobolka Gedo oo manta ka furmay…